Ampidiro ao amin'ny Ubuntu sy ny derivatives | Ubunlog
Mametraha Spotify amin'ny Ubuntu sy ny derivatives
Tonga Spotify iray amin'ireo serivisy fitaterana mozika malaza indrindra, Tsy misy isalasalana. Misaotra ny doka marobe natolotry ny serivisy amin'ny haino aman-jery samihafa ary koa ny fifanarahana izay vitany natsangana niaraka tamin'ny orinasa sasany.
ihany koa amin'ny lafiny iray hafa dia ny fanampiana nomen'ny mpilalao ireo sehatra samihafa toy ny fitaovana finday, ary koa ny rafitra miasa. Ho an'ny rafitra Ubuntu malalantsika dia manana mpanjifa ofisialy Spotify izahay noho izany tsy ilaina ny mila manatona mpanjifa avy amin'ny antoko fahatelo.
Amin'izany no ahafahantsika mankafy ny serivisy omen'i Spotify anay, izay raha manana kaonty maimaim-poana ianao dia afaka mihaino ny mozikanao, fa kosa ho takalon'ny fanaovana doka amin'ny mpilalao.
Indraindray koa ianao maheno fampandrenesana, tsy ho afaka ny hisintona mozika ianao ary hahafahanao miasa fanampiny.
Etsy ankilany, misy ny serivisy premium izay nesorina ireo fameperana voalaza etsy ambony ireo, ankoatry ny fahafahanao mifehy ny mpilalao amin'ny fitaovana hafa, izany hoe fanaraha-maso lavitra amin'ny teny vitsivitsy.
Ho an'ireo mbola tsy mahalala ny serivisy Amin'ny fomba fohy, azoko lazaina aminao fa programa multiplatform ny Spotify, araka ny efa noresahiko teo aloha, azo ampiasaina amin'ny Windows, Linux sy MAC, ary koa Android sy iOS.
Ao anatin'izany no ahafahanao mankafy mihaino mozika miaraka amin'ny hany takiana amin'ny fananana fifandraisana Internet, omen'ny karazana serivisy an'io.
Izy io dia manana repertoire mpanakanto sy rakitsoratra mahafinaritra azonao jerena azo henoina.
Ankoatr'izay, ny fampiharana dia tambajotra sosialy, ahafahanao manaraka ny mpanakanto tianao indrindra ary ampahafantarina anao ny famoahana vaovao, ary koa ny hetsika akaiky anao.
Safidy roa no apetraka eto amin'ny rafitray.
1 Ahoana ny fametrahana Spotify amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
2 Ahoana ny fanesorana ny Spotify amin'ny rafitra?
Ahoana ny fametrahana Spotify amin'ny Ubuntu sy ny derivatives?
Ho an'ny fametrahana Spotify ao amin'ny rafitray, tsy maintsy manokatra terminal izahay ary manatanteraka ireto baiko manaraka ireto, tsy maintsy ampidirintsika voalohany ao amin'ny rafitra ny tahiry:
Avy eo izahay dia miroso amin'ny fanafarana ny lakile:
Manavao ny trano fitahirizana izahay:
Ary farany mametraka amin'ny:
Ny fomba fametrahana hafa no tena atoro anao, satria izao ny mpamorona Spotify miandraikitra ny fanomezana fanampiana Linux dia hifantoka amin'izany.
Ny fomba dia amin'ny alàlan'ny fonosana haingana, ankoatry ny fankafizana ny tombony rehetra amin'ny fampiasana an'ity karazana fonosana ity ao amin'ny rafitra.
Raha mampiasa Ubuntu 14.04 ianao dia tsy maintsy mametraka ny fanohanana ny Snap miaraka amin'ity baiko manaraka ity:
Mametraka Spotify izahay amin'ny:
Solo tsy maintsy miandry ny fonosana hisintona sy hametraka amin'ny rafitra isikaMiankina amin'ny fifandraisanao amin'ny Internet ny fotoana anaovana azy, satria mavesatra mihoatra ny 170mb ny programa.
Vantany vao vita ny fametrahana dia mila mitady ilay rindranasa ao anaty menio fotsiny isika ary mampandeha ny mpanjifa Spotify. Raha vantany vao misokatra ny mpanjifa dia afaka miditra ao izy ireo na raha mbola tsy manana kaonty avy amin'ilay mpanjifa iray ihany izy ireo dia afaka mamorona iray.
Eto dia efa hisafidy ianao raha maimaim-poana na andoavam-bola hankafizanao ireo serivisy premium.
Azonao atao ny mitady ny sasany amin'ny fampiroboroboana izay mazàna manana Spotify izay omen'izy ireo anao iray na roa volana premium amin'ny vidiny na roa volana premium amin'ny vidiny mora azo, eto Mexico dia ambany dolara latsaka.
Raha tsy te-hanao fametrahana amin'ny rafitrao ianao dia afaka mampiasa ny serivisy amin'ny tranokalanao, mila mandeha mankany amin'ny tranokala ofisialin'ny Spotify fotsiny ianao ary eo ambany no hahitantsika safidy iray izay milaza fa tsindrio ny mpilalao Internet ao ary dia halefa any amin'ny url an'ny mpilalao tranonkala Spotify.
Ahoana ny fanesorana ny Spotify amin'ny rafitra?
Farany, raha nanapa-kevitra ny hanaisotra ny serivisy ianao, na inona na inona antony dia tsy maintsy manokatra terminal fotsiny izahay ary manatanteraka ity baiko manaraka ity.
Raha nametraka tamin'ny Snap ianao:
Raha toa ka napetraka ny fametrahana:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: ubunlog » Software » Multimedia » Mametraha Spotify amin'ny Ubuntu sy ny derivatives
jmfa dia hoy izy:
Mamaly an'i jmfa
kekepascual dia hoy izy:
Misaotra betsaka noho ny fanampianao, tsy nampiasa ilay fonosana haingana aho ary niasa tamin'ny voalohany.
Mamaly an'i kekepascual
Raha isaky ny fampianarana na ny fidirana izay sazy google dia efa lany andro na diso. Ubunlog handeha ho any amin'ny ...
Rustan dia hoy izy:
Valiny tamin'i Rustan
Tsy tiako spotifay misaotra
Hifarana amin'ny 11 aprily ny fisoratana anarana amin'ny Edisiôna III an'ny loka misokatra
Lubuntu Next dia hampiasa an'i Calamares ho mpanamboatra tsiro ofisialy